STIMUL-1000 OO AH BEERJIR AH: DIB-U-EEGIS, SHARAXAAD KA MID AH ASTAAMAHA IYO TILMAAMAHA ISTICMAALKA - KUFSI
Kaabeeysi loogu talagalay tiro badan oo ukumo ah ayaa beerta digaaga u qaata si cusub, oo hufan, heer sare. Isticmaalka cutubyada noocan oo kale ah waxay u ogolaanayaan inaysan helin tiro badan oo digaag ah, laakiin sidoo kale waxay hubisaa in ay hagaagsan yihiin oo ay wanaagsan yihiin, taas oo ah, dakhliga xasilloon. Wakiil tayo sare leh oo wakiil ka ah noocyada qalabka sida waa "Stimul-1000". Sidee cutubkan u shaqeeyaa, iyo maxay yihiin sifooyinka lagu dhejiyo, akhriya aragtidan.
Stimul-1000 waxaa loogu talagalay taranta digaagga - digaagga, berriga, shimbiraha, shinbiraha. Qalabka waxaa lagu xakameynayaa gacanta elektaroonigga ah Isticmaaluhu wuxuu dhigaa ukumo wuxuuna dejiyaa xuduudaha rakibidda, hubinta horumarka chicks. Stimul-1000 waxaa loo isticmaali karaa qoysaska ama beeraha.
Qalabka noocan oo kale ah wuxuu leeyahay laba qaybood oo loogu talagalay ukumoobidda ukumaha iyo dhalinta yar yar.
Tusaaluhu wuxuu ku qalabaysan yahay:
Diyaarinta taraagyada 45 darajo ee diyaaradda (automatic);
hannaanka qaboojinta biyaha qaboojiyaha oo isticmaalaya marjooyin ku rakiban saqafka qolka;
Marka barnaamijka la dejiyo ka dib, cutubku wuxuu ku shaqeeyaa qaab si toos ah. Xakamaynta nidaamka waxaa lagu fuliyaa iyadoo la adeegsanayo dareemayaasha. Waxaa jira nidaam difaac ah oo kulul. Khadka isweydaarsiga waxaa lagu sii daayaa NPO Stimul-Ink.
Shirkadu waxay soo saartaa, horumarisaa iyo sahayda:
beeraha iyo warshadaha warshadaha si loo kordhiyo dhammaan noocyada digaaga;
qalabka koritaanka iyo processing digaagga.
Qaabka Stimul-1000 waxaa lagu soo bandhigaa sadex nooc oo isugeyn ah:
"Stimul-1000U" - universal, oo isugu jira 756/378 ukunta;
"Stimul-1000V" - hatcher, oo isugu jira 1008 ukun;
Stimul-1000P waa horay u-qaboojiye nooca la isugu daray 1008 ukun.
Cutubka hordhaca ah waxaa loogu talagalay in laga hortago ukumaha laga bilaabo 1 ilaa 18 maalmood. Maalinta 19-aad, ukumaha ayaa loo wareejiyaa tuunbada mindhicirka hatchery halkaas oo chicks lagu hayo. Isku dar waxaa loola jeedaa in qaabka loo isticmaali karo labadaba looxyada iyo qashinka.
Ma taqaanaa? Australiya dhagta qoyan ee duurjoogta ah ma daboolayaan ukumaha. Ragga shimbirta ah waxay iyaga u dhisaan nooc ka mid ah kulaylka - god oo leh dhexroor 10 m, oo lagu buuxiyo isku dhaf ah iyo ciid. Iyada oo saameyn ku leh qorraxyada dhirta qorraxda iyo waxay siinaysaa heerkulka la doonayo. Dumarku waxay dhigtaa 20-30 ukun, ragga waxay ku daboolan yihiin dhirta iyo tallaabooyinka maalin kasta heerkulkiisa leh dhareer. Haddii ay sarreyso, waxay ka saaraysaa qaar ka mid ah maaddooyinka daboolka ah, oo haddii ay hooseyso, ay soo sheegayso.
Qalabka jirka - Qalabka PVC Qalabaynta waxaa laga sameeyaa albaabbada. Qalabka kuleyliyaha wuxuu ka samaysan yahay xumbada poliurethane. Saldhigyada maskaxda iyo kuwa la jarjaray waxay ka sameysan yihiin polymer. Qalabka farsamada elektarooniga ah ayaa kontaroolaya qalabka qalabka. Qalabka istiraatiijiga ah waxaa loogu talagalay in lagu rogo gawaarida marka loo eego diyaaradda asalka ah ee xagasha 45 darajo dhinaca bidixda ama midigta. Taageerada saddex-geeska ah waxay bixisaa sarrifka hawada ee rakibidda. Qalabka wuxuu ka shaqeeyaa caanaha oo leh tamar ah 220 V. Fikrad badan ayaa la siiyaa soo saaraha teknoolajiyada tamarta-badbaadinta. Si toos ah kuleylintu waxay socotaa wax ka badan 30% wakhtiga geeddi-socodka oo idil. Joogtaynta heerkulka gudaha qolka waxaa bixiya qalab kuleyliyaha - xumbada poliurethane. Haddii dareeraha kuleylku ogaado hoos u dhaca 1 degree, kuleylka ayaa soo jeedi doona dhowr daqiiqadoodna kor u qaadaya qiimaha midka la dhigay.
Ma taqaanaa? Tirakoobyada ay bixiyeen injineerada xarumaha adeegga ee hagaajinta kulubka, waxay soo jeedinayaan in moodooyinka qaaliga ah ee jaban ay jabaan marar badan waxayna ku adagtahay in la dayactiro kuwa ka shaqeeya raqiis. Sababta waa mid fudud - jacaylka xad dhaafka ah ee elektarooniga khabiirada reer galbeedka ayaa si weyn u ballaarinaya liiska qaladaadka, taas oo keenaysa bedelida guud ee qaybaha elektarooniga ah.
Saldhigyada xakamaynta waxaa ku jira:
1008 ukun digaag;
2480 - digaagduur;
800 - turkey
Stimul-1000 waxay ku qalabaysan tahay baakidh iyo baakidh. Cabbirka tusaalaha: 830 * 1320 * 1860 mm. Ka shaqeeyaa shabakada korontada ee caadiga ah. Unugga wuxuu si toos ah u kontaroolayaa heerkulka hawada, qoyaanka, sarrifka hawada. Xirmada waxaa ka mid ah:
6 mesh iyo 12 tiirbaax oo ah unugyada maskaxda;
3 buufis ku xiran.
Heerkulka joogtada ah waa + 18-39 ° C. Kuleylka qolka waxaa lagu sameeyaa qaybta kululaynta oo leh awoodda 0.5 kW. Qoyaanka waxaa lagu xakameynayaa iyada oo uumi uumi uumiga biyaha, kaas oo qulqulaya faleemaha. Qaboojinta waxaa bixiya habka hawada. Hannaanka hawlgalka ayaa haya heerkulka iyo qoyaanka qiyaasaha isticmaalida dareemayaasha.
Waxaan kugula talineynaa inaad barato sidii aad si madaxbanaan uga sameysan lahayd qaboojiye ka soo qaboojiyaha hore.
Xakamaynta heerkulka iyo qoyaanka waxay qabataa qodobbada la dejiyay. Tilmaamaha caadiga ah ee ukunta digaaga waa sidan soo socota:
heerkulka - +37 ° C;
qoyaan - 55%.
Xaqiijinta xuduudaha la taageeray - illaa 1%. Ku rakibidu waa sahlan tahay in lagu hayo oo shaqeeyo. Qeybta xakameynta maskaxda
Faa'iidooyinka Kombiyuutarada Stimul-1000 waxaa ka mid ah:
suurtagalnimada in lagu daro ukunta digaagga kala duwan;
isugeynta simaha ee tiro badan oo ukun ah;
Farshaxanka: Qaboojinta iyo ka noqoshada hal cutub;
Dhaqdhaqaaqa tusaalaha ah: joogitaanka giraangirrada waxay fududeyneysaa in la dhaqaajiyo dhismaha;
Xakamaynta poliurethane waxay si fiican u ilaalisaa xaaladaha heerkulka gudaha qolka;
gawaarida gawaarida ee gawaarida iyo xakamaynta hawo-qaadashada iyo hawada qoyan;
Qalabka kuleylka kuleylka wanaagsan ee kamaradda.
Waa muhiim! Kobcinta waa in laga ilaaliyaa korontada korantada ee korontada iyadoo la adeegsanayo 220 V. Unugjirta korantada ee aan kor ku jirin Qaybtu waxay u dhigantaa korodhka korantada iyo ilaalinta qalabka qalabka inta lagu jiro korantada si deg deg ah. Haddii dhacdooyinka noocan oo kale ah aan caadi ahayn aaggaaga, markaa waxaad u baahan tahay inaad daryeeshid joogitaanka 0.8 kW ee koronto-dhaliyaha.
Dammaanadda dakhliga sare ee digaagga waa ilaalinta tilmaamaha loogu talagalay hawlgalka qalabka iyo shuruudaha haynta, taas oo ay ku kala duwan yihiin noocyada shimbirta.
Qalabka waxaa lagu dhejin karaa qol kasta oo leh heerkulka qolka hawada, i.e. aan ka hooseeynin +16 ° C Heerkulka cimiladu wuxuu saameeyaa howlaha noodhka ee taageeraya nidaamka gudaha ku-oolka, iyaga oo ku khasbaya in ay si firfircoon uga shaqeeyaan. Hore, hawo cusub waa in ay ahaataa, maxaa yeelay waxay ka qayb qaadataa diyaaradaha hawada gudaha gudaha rakibaadda. Waa wax aan loo baahnayn qorraxda tooska ah si ay ugu dhacdo masraxa. Nidaamka isticmaalka qalabka wuxuu ka kooban yahay talaabooyinka soo socda:
diyaarinta qalabka waxqabadka;
dayactirida cutubka kaddib marka la qaboojiyo.
VIDEO: NIDAAMKA KA QAYB QAADASHADA DADKA INCOMATOR "Stimulus-1000"
Si loo hirgeliyo geeddi-socodka in uu noqdo mid deggan oo aan ku tiirsanayn dhibaatooyinka hawlgalka korontada, hubi inaad iibsato koronto-dhaliye. Waxay xaqiijineysaa sida uu u shaqeynayo qalabka korontada. Waxay ku xiran tahay caanaha iyada oo loo marayo unug aysan awood u lahayn tamarta korontada, hawsha ay tahay in la isku nadiifiyo kor u qaadista koronto.
Fiiri xaalada xadhkaha awoodda. Ha ku shaqeynin cutubka waxyeello ku xiran xadhkaha awoodda ama xakamaynta kiiska. Kombiyuutarada waxaa ka mid ah oo hubiya hawlgalka habka wareegga ah, hababka hawo-gelinta iyo kuleylka habka aan shaqeynin. Fiiro gaar ah sidoo kale sida saxda ah ee akhrinta dareenka. Haddii wax walba si sax ah u shaqeeyaan, qalabka ayaa laga jarayaa shabakada oo wuxuu bilaabaa in uu diyaariyo maaddo loogu talagalay. Haddii dhibaatooyinka la ogaado - la xiriir xarunta adeega.
Waa muhiim! Waa mamnuuc inaad geliso kuleyliyaha ama qaboojiyaha kuleylka.
In nidaamka qoyaanka ku shub biyo diirran kulul. Biyaha waxaa lagu quudin karaa heesaha
Si loo xakameeyo, ukunta nadiifka ah ee qiyaasta isku mid ah ayaa loo isticmaalaa. Tani waxay hubineysaa in ay ku dhowdahay marxalado isku mid ah. Ukuntu waa inay noqotaa mid cusub, oo leh nolol shelf oo aan ka badneyn 10 maalmood. Nuqullada waxaa lagu hubiyaa baaritaanka ka hor inta aan la saarin, ka dibna lagu rido baakidhka lagu rakibay rafcaanka.
Dabcan, baaritaan ku saabsan baaritaanka ukumaha ayaa laga iibsan karaa dukaanka, laakiin ma adkaan doonto inaad adigu sameysid.
Cufnaanta safka ayaa hubin doonta ammaanka ukunta marka la wareegayo. Haddii ka dib marka la geliyo saxaarada waxaa jira meel ka hartay - waxaa la dhigaa caag xumbo si aad u hagaajisid qaraabada qunyar socodka ah ee saxaarada.
Waa faa'iido leh in la barto sida si habboon loo nuugo ukumaha ka hor inta aan la gelinin masraxa.
Dabadeed xayawaan la duubay ayaa la geliyaa xashiishka. Isticmaalka boodhadhka iyo koontaroolka gacanta, xuduudaha soo socda ayaa la dejiyaa:
heerkulka hawada ee qaboojinta gudaha gudaha;
Looma baahna inaad u guurto ama soo jiido ukumaha inta lagu jiro geedi socodka. Adiga, tani waxay sameeyn doontaa qalab wareeg ah oo gadaaliya dhammaan baayacyada oo dhan marka loo eego tiirsanaanta ka dib waqti cayiman. Xir xididada oo u rog. Hubi in qalabku uu ku shaqeynayo habka la cayimay.
Waxaan kugula talinaynaa in aad akhrido xeerarka ku dhajinta ukumaha ku jira xariirka.
Inta lagu guda jiro geedi-socodka, kormeerka marxaladaha heerkulka iyo qoyaanka, iyo sidoo kale jiritaanka biyaha nidaamka, ayaa loo baahan yahay. Inta lagu jiro kaboojinta, ukumada ayaa si joogta ah loo xakameeyaa iyada oo la xirxirayo oo aan la taaban karin (taas oo embriyaha uusan bilaabin ama joojin) laga saaro. Waqtiga wakhti (maalmo):
digaagga - 19-21;
digaaga - 15-17;
ducks - 28-33;
berriga - 29-31;
turkiga - 28.
3 maalmood ka hor dhammaadka qoraxda, ukunta waxaa laga wareejiyaa safarada kuleelada ilaa dabaqyada. Tuubooyinkaas waa inaan loo celin. Kalluumeysiga qashin adiga oo aan wax ka-qabashadaada. Ka dib marka ilmuhu uu qabsado, waxay u baahan tahay ugu yaraan 11 saacadood si ay u qalalaan, kaliya ka dib markii la geyn karo "xanaanada".
Waa muhiim! Haddii qayb ka mid ah digaagga la duubay, oo qofna uu ka danbeeyo, ka dibna iyaga loogu talagalay heerkulka kuleylaha waxaa kordhay 0.5 darajo. Waxay xoojineysaa geedi socodka.
Haddii digaaggu uu jajabiyey qolofka, gaajada oo gaabin, qaniinaan qolofka, laakiin ma baxo - waxay siiyaan hal maalin oo waxa ay la qabsan doontaa nafteeda, ka yaraa kuwa kale. Haddii jajabku si aan caadi ahayn, ka dibna qolofka ama gaasku wuu dhegi karaa oo faragelin karaa digaaga. Xaaladdan oo kale, waxaad u baahan doontaa caawimaad: gacmo qoyan biyo diirran, ka saar ukunta iyo qoyan filimka. Uma baahnid inaad is-disho naftaada.
Digaagga la qalajiyey, kuwaas oo firfircoon, waa in laga saaraa kuleylaha, si aysan u faragelin dadka kale si ay u qabtaan. Dhamaadka geeddi-socodka, qalabka waxaa lagu dhaqaa xalka suufka iyo saabuunta, baakadaha ayaa la qalajiyaa oo la dejiyaa.
Kharashka Isticmaalida Stimul-1000 wuxuu ku saabsan yahay $ 2,800. (157 kun ama 74,000 UAH). Kharashka waxaa ku qoran maamulayaasha shirkadda wax soo saarka ee bogga internetka ee Stimul-In NPO ama bogga shirkadda iibinta.
Markaad dooratid kuwa qaboojiyeyaasha waa inay ku saleysnaadaan baahidaada iyo kalsoonida qaybta la soo iibsaday. Stimul-1000 waa kuwa ugu tayada sarreeya, boqolkiiba 100 waafaqsan hawlaha la dejiyey, jawaab celinta jawaabcelinta iyo qiimaha caadiga ah ee qalabka noocan ah. U muuqaalka muuqaalka iyo tayada qalabkeedu maaha mid ka sii daraya ajaanibta shisheeye, kharashkuna wuxuu bixinayaa dhaqso ka badan qalabka la soo dejiyo. Qalabka masiibada ayaa la heli karaa dhawr maalmood gudahood, iyadoo ku xiran qaabka gaarsiinta iyo masaafada gobolka. Intaa waxaa dheer, haddii ay jirto wax qalad ah ee qalabka, waxaad had iyo jeer la xiriiri kartaa xarunta adeega soo saaraha iyo hel talo, taas oo aan macquul aheyn cutubyada yurub.
Marka aad soo iibsaneysid naqshad, hubi inaad taxaddar u yeelatid sifooyinka alaabooyinka laga sameeyay, iyo damaanad-qaadaha soo-saaraha qalabka. Tani waxay kaa caawineysaa inaad si dhaqso ah u maalgeliso lacagtaada.
Waxaa jira masaafo aad u ballaaran oo u dhexeeya taraamka iyo derbiyada, i.e. mugga qadar-yaraha looma isticmaalo si qumman, looma fiicnayn natiijooyinka ka soo baxa garsoorka, iyo iibsadaha si cad u sarreeya.
Waxba ma arko wax xun. Uma maleynayo in shuruudan ay saameyn ku leedahay tayada qandaraaskan. Waxaan ku soo biiray shirkadda dhiirigelinta sannadkii hore, aad ayaan ugu faraxsanahay. Tababarka ugu horreeya wuxuu ahaa 400 ukun turki ah, kaas oo 327 carruur aad u xoogan la siiyey. Anigu si taxaddar leh ayaan uula dhaqmay, waxaan u jawaabay dhammaan su'aalaha, gebi ahaanba la calalin jiray, waxna baray wax kasta. Mahad gaar ah maareeyaha Irina iyo Valentina, oo sabir iyo ficil aan ku fashilmay ayaa ka muuqday wicitaankeygii ugu horeeyay. Waxaan dhigay ukunta Big-6. Sanadka oo dhan, waxaan ku beeray broilers iyo quustin aan dhibaato lahayn. Intaa waxaa dheer, markii ay qabteen dhowr khibradood, baaritaanada caalamiga ah ayaa loo habeeyey si ay u soo saaraan wax soo saarka waxkasta oo guud ahaanna noqday mid aad u fiican. Carruurta waxaa lagu soo bandhigaa labadaba hatcheries iyo kuwa hordhaca ah. Waxaan haystaa qaab isweydaarsi wadaag ah si aan u baahdo. Waxa kaliya ee aan la kulmay waxay ahayd in haddii ukun turkey ah yahay mid weyn, ka dibna lambarka la sheegay wuxuu ku haboon yahay saxanka ka hor. Kuwa marka aad iibsanayso ukunta, fiiro gaar ah u yeelo cabbirkooda, kana fiirso tan. Inta soo hartay waa wax fiican. Waxay qabataa shaqooyinkeeda 100%.